Chemishonga & Nutraceutical Kuzadza Machine - Micvd.com
Pharmaceutical & Nutraceutical Kuzadza Machine
NPACK inodada kupa mvura yekurongedza machina emhando dzakasiyana dzeindasitiri dzakasiyana, kusanganisira mishonga yemishonga uye zvikafu zvinovaka muviri. Kana iwe uchida kutenga michina yeyako yekurongedza, zvakakosha kusarudza michina yakavakirwa kumira kune makemikari iwe auri kuzoshandisa nawo, pamwe nemashina akagadzirirwa kuti agare kwenguva yakareba. NPACK inodada nekupa michina inosangana nezvose zviri zviviri maitiro.
Kusarudza Iyo Yakakodzera Kupakata Midziyo Kubva NPACK
Iyo viscosity, acidity, zvimedu zvinovaka uye zvimwe zvezvigadzirwa zvemishonga zvinosiyana zvakanyanya. NPACK inogadzira tsika yekuzadza masisitimu ezvigadzirwa zvemishonga kana ezveutano zvemarudzi ese, achive nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvemabhodhoro zvaunoshandisa mumutsetse wako wekugadzira zvinowirirana kwazvo nemakemikari amunoita iwe.
Mishini yedu inogona kugadzirwa kuti ienderane nezvinodiwa izvi, kusanganisira kuve nekungodzivirira kutu. Corrosion inopesana nemidziyo inogona kuvakwa kubva kuzvinhu zvakaita seHDPE (yakakwirira density polyethylene), UHMW, kana PVC, uye iri nyore kuchenesa kuti igone kushanda zvakanaka. NPACK inopa dzakasiyana siyana dzemidziyo yakasiyana, saka kunyangwe iwe uchingoda muchina mumwe chete sekutsiva kana kuwedzera, kana uchivaka turu yekupakatira kubva pakatanga, iwe unowana zvaunoda pano.
Inowanikwa Midziyo YeLiidid Kuzadza Mitsetse
Tinodada nazvo NPACK kukwanisa kushandira zvese zvikamu zvemapaketi ekufambisa, kubva pakutanga kusvika pakupedza. Paunofungisisa yedu yekutsvaga iwe unowana zvese kubva kumidziyo yemabhodhoro kuti uve nechokwadi chekuti midziyo haina mari yemarara isati yazara nechigadzirwa, kunyorera michina inonamira zvinyorwa zvechigadzirwa mumidziyo yako. Isu tinopawo varatidziri kuti vauye nemidziyo kuchiteshi choga-choga, uye nemakina akasiyana-siyana ekuzadza mvura, anosanganisira:
Net uremu mafirimu
Nei Sarudza NPACK Kavha Midziyo?
Pasina iyo chaiyo yekubhinha masisitimu, yako mishonga uye ine hutano zvigadzirwa inogona kukanganiswa panguva yekugadzira. Corrosion, machira, kupaza, kusara uye nezvimwe zvinogona kuita kuti zvive zvakaoma kuchengetedza hutsanana, pamwe nekuchengeta mutsara wako uchishanda zvakanaka. Midziyo yedu yekuzadza yakagadzirirwa kutenderedza mhando dzemakemikari pamutsetse wekereke, saka iwe unoziva kuti zvigadzirwa zvauri kuzadza uye mabhodhoro hazvizokanganiswi nemakina ako-kana zvinopesana.
Bata nesu nhasi kuti tidzidze zvakawanda nezve mabhodhoro ezvigadziriso zvigadzirwa zvatinopa kuti zvifanane neakasiyana ehutano uye emishonga zvigadzirwa. Isu tinofara kubatsira vatengi vedu kuwana zvigadzirwa zvepamusoro zvetsetse yavo.
Monoblock Kuzadza uye Cap Machine
Muchina uyu unogadzirisa 316L simbi isina pombi yekuzadza mhando dzakasiyana dzemadziro, kuzadza nekutora kuri muchina mumwe. Shongedza zvesoda cosmetic, chikafu chekudya, mishonga yemishonga uye indasitiri yemuchina.
1.Adaptine nepombi iyo inogona kuzadza viscosity fluid, yakanyanya kujeka, nyore kuchenesa uye kusanganisa saridhi.
2.Iye emvura inosangana zvikamu zvinogona kuve akasiyana zvinhu kuti zvifanane zvakasiyana zvinwiwa
3.Fill Vhoriyamu iri nyore kugadzirisa, uye Micro yakagadziriswa yakarongedzwa kune yega yega yekuzadza mazizi
4.Fill yemazizi inogona kuva anti-madonhwe, silika, uye kubhururuka; Pazasi kuzadza yakagadziridzwa eine foamy zvinwiwa
5.WILLIAMSON peristaltic pombi kana ceramic pombi ndeye sarudzo
chinhu NP-MFC8 / 2 NP-MFC4 / 1
Kuzadza mazai 8 4
Catch nozzles 2 1
Kuzadza bhora 20 ~ 1000ml
Yakanakira Kuzadza huwandu 20-100ml \_50-250ml\_100-500ml\_200ml-1000ml
Cap types Akavharika macaps, screw cap, ROPP, Aluminium cap
chinzvimbo 3600 ~ 5000b / h 2400 ~ 3000b / h
kunyatsoita ± ± 1 ％
simba ≤2.2kw ≤1.2kw
Dhigiri (mm) 2600 × 1300 × 1600 2200 × 1300 × 1600
1.Iri monoblock muchina, chengetedza mutengo uye nzvimbo yemusangano
2.Muchina unogona kuzadza mutete muto kune viscosity fluid kana ukasarudza mhando dzakasiyana dzekuzadza system
Otomatiki Mazino Cartridge Kuzadza, Stoppering uye Capping Machine
Inoshandiswa kumabhodhoro madiki, uye kusagadzikana mabhodhoro ekuzadza, kumisa uye kuseta, iko kuri kunyorera e-liquid mabhodhoro, jekiseni vials, uye mazino cartridge zvichingoenda zvakadaro.
Shongedza Nokia uye PLC system, inotenderera nyeredzi mavhiri dhiri rebhodhoro kuve nechokwadi chekushanda yakasimba uye yakakwirira kurongeka.
chinhu NP-FSC2 / 1 NP-MFC4 / 2
Kuzadza mazai 2 4
Catch nozzles 1 2
Wemhepo yekugeza mhepo 1 2
Kuzadza bhora 1-10ml, 10-30ml, 30-100ml
Stopper mhando Irubber, plastiki kana simbi
chinzvimbo 30-40b / min 60-80b / min
simba ≤1.2kw ≤2.2kw
Dhigiri (mm) 1500 × 1300 × 1800 1800 × 1500 × 1800
1.Nitrogen bhodhoro rekugeza system isati yazara
2.Over mvura inoyamwa system
3.Automatic pasi pekumira, kuzadza uye kusimbisa mono block
4.Laminar kuyerera uye suo rekuchengetedza
5.the yekuzadza sisitimu inogona kusarudza piston kuzadza, ceramic pombi yekuzadza kana WILLIAMSON peristaltic pombi.
Otomatiki poda auger kuzadza uye capping muchina
Powder kuzadza uye capping muchina ndeyekushandisa otomatiki ekuzadza hupfu Mukati mumabhodhoro, mapaini uye makani, ipapo otomatiki ciling (kusimbisa) mabhodhoro.
Inogona kushandiswa kuzadza glitter powder, pepper, cayenne pepper, mukaka furawa, mupunga mupunga, albumen poda, soy mukaka furawa, kofi poda, mushonga poda, kuwedzera, chinhu uye zvinonhuwira, nezvimwe
Iyo inogona kubatana netafura yekudyira bhodhoro kana bhodhoro unsrambler kubva pakutanga, uye kubatana neNP-RL kutenderera bhodhoro rechina muchina kana NP-TS kaviri padanho rekutsikisa machina kuve yakazara yakazara otakura marata.
Stainless simbi chimiro, danho rakapatsanurwa hopper, nyore kushamba
Servo-mota inotyairwa auger.
Servo-mota inodzorwa turntable neyakagadzika mashandiro.
PLC, kubata chidzitiro uye kuremedza module kutonga.
mhando NP-PAF-1 NP-PAF-2
Bhokisi diameter Φ15-80mm (chinja
Bhokisi refu 15-150mm (kuchinja)
Kuzadza Weight 1 – 5g,5-30g,30-100,100-500g
Kuzadza zvakarurama ≤ 100g, ≤ ± 2%; 100 - 500g, ≤ ± 1%
Kuzadza Mhepo 15 - 35bottles / min 30 - 70 mabhodhoro / min
Magetsi 3phase AC380V 50 / 60Hz
Kwose Kupera 1400 × 1120 × 1850mm 1700 × 1420 × 2000mm
Hopper Volume 35L 25L (mbiri hop hop)
1. Servo mota inotyairwa, LG PLC uye kubata screen
2. Shongedza ne otomatiki poda inodyisa yekupa hupfu mune hopper
3. Yakagadzirirwa neguruva rekuvhara uye guruva rekuyamwa system paunenge uchizadza hupfu.
4. IT inowedzera kuzadza nozzle uye capping musoro kuwedzera kuwedzera kushanda